Atomic Coin စျေး - အွန်လိုင်း ATOM ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Atomic Coin (ATOM)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Atomic Coin (ATOM) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Atomic Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
ATOM – Atomic Coin
Market ကဦးထုပ်: $728 106 256.00
volume_24h_usd: $3 333.43
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Atomic Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Atomic Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Atomic CoinATOM သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$5.74Atomic CoinATOM သို့ ယူရိုEUR€4.84Atomic CoinATOM သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£4.38Atomic CoinATOM သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.5.22Atomic CoinATOM သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr51Atomic CoinATOM သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.36.08Atomic CoinATOM သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč126.4Atomic CoinATOM သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł21.31Atomic CoinATOM သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$7.59Atomic CoinATOM သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$8Atomic CoinATOM သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$128.08Atomic CoinATOM သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$44.47Atomic CoinATOM သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$31.18Atomic CoinATOM သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹429.4Atomic CoinATOM သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.966.27Atomic CoinATOM သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$7.86Atomic CoinATOM သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$8.73Atomic CoinATOM သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿178.17Atomic CoinATOM သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥39.84Atomic CoinATOM သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥612.95Atomic CoinATOM သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩6794.15Atomic CoinATOM သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2206.37Atomic CoinATOM သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽421.16Atomic CoinATOM သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴157.91
Atomic CoinATOM သို့ BitcoinBTC0.000497 Atomic CoinATOM သို့ EthereumETH0.0149 Atomic CoinATOM သို့ LitecoinLTC0.106 Atomic CoinATOM သို့ DigitalCashDASH0.0632 Atomic CoinATOM သို့ MoneroXMR0.0644 Atomic CoinATOM သို့ NxtNXT447.56 Atomic CoinATOM သို့ Ethereum ClassicETC0.846 Atomic CoinATOM သို့ DogecoinDOGE1655.88 Atomic CoinATOM သို့ ZCashZEC0.0697 Atomic CoinATOM သို့ BitsharesBTS176.76 Atomic CoinATOM သို့ DigiByteDGB183.59 Atomic CoinATOM သို့ RippleXRP20.38 Atomic CoinATOM သို့ BitcoinDarkBTCD0.198 Atomic CoinATOM သို့ PeerCoinPPC19.04 Atomic CoinATOM သို့ CraigsCoinCRAIG2614.52 Atomic CoinATOM သို့ BitstakeXBS244.69 Atomic CoinATOM သို့ PayCoinXPY100.17 Atomic CoinATOM သို့ ProsperCoinPRC719.97 Atomic CoinATOM သို့ YbCoinYBC0.00308 Atomic CoinATOM သို့ DarkKushDANK1841.48 Atomic CoinATOM သို့ GiveCoinGIVE12428.23 Atomic CoinATOM သို့ KoboCoinKOBO1307.29 Atomic CoinATOM သို့ DarkTokenDT5.28 Atomic CoinATOM သို့ CETUS CoinCETI16573.32
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 13 Aug 2020 11:50:03 +0000.